Afọ ncheta nnwere onwe nke afọ iri ise na ise nke Suriname
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Suriname » Afọ ncheta nnwere onwe nke afọ iri ise na ise nke Suriname
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ Suriname • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Emume ncheta afọ iri ise na ise nke nnwereonwe nke Suriname bụ etu esi eme mmemme na Nọvemba 45th 2020. Emere Independbọchị Mwere Onwe (Onafhankelijkheidsdag) bụ ụbọchị ezumike ọha na-eme kwa afọ
Na November 25th N'afọ 1975, Suriname nwetara nnwere onwe ya n'aka Alaeze Netherlands. N’ọnwa ndị bu ụzọ tupu nnwere onwe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị Suriname kwagara Netherlands.
Onye isi ala mbụ nke mba ahụ bụ Johan Ferrier, onye bụbu gọvanọ, na Henck Arron bụ Mịnịsta Ala.
Ndị na-esonụ bụ isi nke nzukọ ezumezu ZOOM emere na nso nso a (22/11/2020) na isiokwu “Ndị 45th Independbọchị ncheta nnwere onwe nke Suriname. ” Nzukọ Pan-Caribbean nwere ụlọ ọrụ Indo-Caribbean Cultural Center (ICC). Onye isi oche ya bụ Varsha Ramrattan amd nke Dr. Kirtie Algoe duziri, ụmụ nwanyị abụọ si Suriname.
Ndị kwuru ya bụ ANGELIC ALIHUSAIN-DEL CASTILHO, onye bụbu onye nnọchi anya Suriname na Indonesia na Onye isi oche nke Democratic Alternative91 (DA'91) otu; DR. DEW SHARMAN, onye dibia bekee na osote onye isi oche nke National Assembly / nzuko omeiwu nke Suriname; na DR STEVEN DEBIPERSAD, bụkwa onye dọkịta na onye nkuzi na akụnụba na Mahadum Anton de Kam nke Suriname.
CASTILHO kwuru, sị:
“Isi ihe Suriname lekwasịrị anya bụ na Netherlands, ọ bụ ezie na Suriname sonyere CARICOM [ndị Caribbean Community] na 1995.
Kemgbe afọ niile nnwere onwe anyị, esemokwu agbụrụ na-adịghị. Agbanyeghị, ọ ka bụ ihe anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ime ya. Iji jikọọ Suriname n'otu agbụrụ ga-abụ ihe mgbaru ọsọ anyị maka afọ 45 sochirinụ.
N'ime afọ iri anọ na ise gara aga, ọ bụ naanị otu ụlọ ọrụ - ngalaba na - ekpe ikpe - ka na - agbanwebeghị ma guzogide ọchịchị ọjọọ, ma tụkwasịrị ya obi ma kwanyere ya ùgwù.
Nnwere onwe bụ njem na-anaghị agwụ agwụ. Mgbe afọ 45 gachara, anyị ka nwere esemokwu iji dozie oke ala anyị, mana yana n'etiti ókèala anyị na ụmụ amaala anyị. Nke a enweghị ike ọ gaghị abụ ihe nketa nke ọgbọ ọzọ. Anyị ga-etinye ntọala siri ike maka ezi ọchịchị, ọchịchị onye kwuo uche ya na usoro iwu yana mmepe akụ na ụba na-aga n’ihu. ”
DR SHARMAN kwuru:
“Na 1873, ndị India mbụ rutere Lalla Rookh dị ka ndị ọrụ akwụ ụgwọ. Na mkpokọta, ihe ruru mmadụ 33.000 bịara Suriname nke ihe dịka 50% si India laghachi.
Ndị mmadụ kpebiri ịnọ na Suriname bụ ndị e mesoro dị ka ụmụ amaala nke abụọ. Ọ bụ ezie na ha rụsiri ọrụ ike iji nweta ndụ ka mma, ekweghị ka ha banye na ọha mmadụ, dịka ọmụmaatụ, site na ewepụ ha maka ọrụ gọọmentị, wdg.
Kemgbe nkwupụta nke ikike ịtụ vootu izugbe na 1949, ndị Surinamese-India bịara mata na ị ga-aga n'ihu na ọha mmadụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na agụmakwụkwọ ga-abụ ụgbọ abụọ dị mkpa.
N'ihi mgba ha na-agba maka ikike nha anya megide Afro-Surinamese ọkachasị, yana ohere dịnụ, e hibere otu ndọrọndọrọ ọchịchị VHP. Ndị otu a bịara bụrụ ndị ama ama ma kwalite esemokwu agbụrụ site na ịnabata usoro nwanne na nwanne.
Ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-aga n'ihu ruo Nnwere Onwe bụ ihe siri ike ma na-eyi egwu maka ọtụtụ ndị Surinamese-ndị India na-atụ egwu mbuso agha agbụrụ dịka o mere na Guyana afọ iri gara aga. N'ihi ihe ịma aka mmekọrịta ọha na eze, ọtụtụ puku ndị Surinamese - nke sitere na India - kwagara Netherlands maka ọdịnihu dị mma na ohere agụmakwụkwọ.
Otú ọ dị, ụfọdụ n'ime ndị ahụ nọrọ na Suriname iji nyere aka mepee mba ahụ. Ndị mmadụ sitere na India bụ akụkụ dị mkpa nke ọha obodo Suriname, n'agbanyeghị na ọnọdụ nwere ike ka mma.
Offọdụ n'ime ndị a etoola ruru ọnụ ọgụgụ nke 400,000. Ndị gara Netherlands nyekwara aka mepee mba ahụ. ”
DR DEBIPERSAD kwuru, sị:
“Suriname dị n’etiti ụzọ dị mkpa e si agafe n’okporo ụzọ. Ugbu a, anyị nọ n'etiti ọgba aghara, yana amụma uto na-adịghị mma afọ a site na 12.5%, na ụgwọ gọọmentị karịrị 125% nke GDP. Ikpokọta nsonaazụ ndị a na akara CC na-aga na ndabara na nnukwu ihe ize ndụ nke mba, ịpị ego ọhụrụ na ịdọta ndị na-etinye ego aghọwo nnukwu nsogbu.
Debtgwọ a na-enweghị ike ijikọ na nsogbu Covid-19 kpatara nsonaazụ nke agbụ nke gọọmentị, na-efunahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40% na uru. Ọktọba bụ oge nke abụọ n'afọ a na Gọọmentị jụrụ ndị na-agbazite ego ka ha tinye ego maka ọmụrụ nwa
Okwu mmechi m dị n'okporo ụzọ dị n'ihu: Nke mbụ, gọọmentị kwesịrị ịrụ ọrụ na nhazi nwughari zuru oke. Uzo uzo a maka iguzosi ike na uto na adigide kwesiri imecha ASAP.
Dị nnọọ ka ihe dị mkpa bụ atụmatụ njikwa ụgwọ ogologo oge, ọkachasị ebe ọ bụ na ụgwọ gọọmentị karịrị ihe karịrị 125% nke GDP ebe akụ na ụba nọ na ndakpọ akụ na ụma ego ndị ọzọ chọrọ iji kpalite arụpụta ihe. ”
Site na atụmatụ ụlọ, enyemaka sitere na IMF kwesịrị ịchọrọ. Nke a abụrụla ihe dị mkpa iji weghachi obi ike na ndị ji ụgwọ ụgwọ na mba ofesi; nke a dị naanị na ego na gbasara ego obodo.
N'otu aka ahụ dị mkpa bụ imekọ ihe ọnụ na US, NL, F, n'etiti ndị ọzọ, iji chọọ ndị na-achụ ego mba ọzọ. -Hapụ ihe ize ndụ emeela ka ndị na-achụ ego ghara ịnọ. Site n'usoro ndị a, anyị ga-akacha aba uru anyị bara. ”
Site n'aka Dr Kumar Mahabir
Seychelles njem nlegharị anya na-enwe nzukọ azụmaahịa mbụ nke 2022 January 25, 2022
Otu bọọdụ ọhụrụ ahọpụtara maka ndị mmekọ UNWTO January 25, 2022
Nnukwu snow dara mechiri ọdụ ụgbọ elu Istanbul January 25, 2022
Edezighị ngwa ngwa: Ngalaba Steeti US na iyi egwu Russia Russia na mwakpo UAE January 25, 2022
Otu netwọk njem nlegharị anya ụwa ọhụrụ VP maka mmekọrịta gọọmentị January 25, 2022
Ejidere ndị njem nlegharị anya Dutch ka ha mechara ekele ndị Nazi na Auschwitz January 25, 2022
Minista Bartlett: Jamaica na-enwe ọganihu mmepe ụlọ oriri na ọṅụṅụ kachasị n'ime otu afọ January 24, 2022
Dr. R. Kenneth Romer kpọrọ osote Director General nke Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation January 24, 2022
Ndị America dọrọ aka ná ntị ka ha zere njem ọ bụla na Russia ugbu a January 24, 2022
Mweghachi njem ọhụrụ na-ewelite mgbanwe January 24, 2022
Onye njem ọhụrụ ahụ: Ịchọ ebumnuche ka Ụwa na-emepegharị January 24, 2022
Akụkọ ụlọ ọrụ nkwari akụ steeti 2022 January 24, 2022
Minnesota chọrọ ịbụ ebe ị na-aga maka ụbọchị ezumike mba January 24, 2022
Kwesịrị ị nweta akwụkwọ ikike njikwa akụrụngwa gị? January 24, 2022
Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation họpụtara Latia Duncombe ka ọ bụrụ onye isi na-eme ihe nkiri January 24, 2022
Nrọ abalị PR: Emirates na-amanye ndị na-elekọta ụgbọ elu ya ka ha felata January 24, 2022
Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri jụrụ ịlaghachi na US, na-achọ ebe mgbaba na Bahamas January 24, 2022
UK ga-akwụsị ule COVID-19 maka ndị ọbịa nwere ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa January 24, 2022
Ebe njem njem afọ kachasị mma n'ụwa niile maka 2022 January 24, 2022
Ọnụ ahịa tiketi ihe nkiri US arịgoro elu n'ime afọ ise gara aga January 24, 2022
Nnyocha: Ole ndị bụ ndị ọ kacha amasị na UK? January 24, 2022
Israel na-ezube nnukwu ụgbọ elu ndị Juu si Ukraine ma ọ bụrụ na Russia wakporo January 24, 2022